Hagaajinta Is-Adeegsiga Sirdoonka | Martech Zone
Khamiista, Sebtember 27, 2012 Wednesday, September 26, 2012 Douglas Karr
Hadaad aniga oo kale tahay, waad quudhsanaysaa la macaamilka adeegga macaamiisha. Maaha inaanan jeclayn dadka - waxay sameeyaan intii karaankooda ah. Laakiin inta badan maahan, waxaan ka ogahay wax badan oo ku saabsan dhibaatada aan la kulmayo in ka badan inta ay iyagu qabaan. Waan necbahay inaan ku fadhiisto taleefanka oo aan haysto 5 daqiiqo, oo aan ku xigo dood muddo 15 daqiiqo ah, waxaa ku xigsii kororka iyo sugitaanno iyo sharaxyo badan
Inta badan arrimaha aniga ayaa is hagaajiya, ama waxaan u jeedsadaa shabakadayda si ay i caawiso. Adeegga macaamiisha ee ugu wanaagsan, feker ahaanteyda, waa aqoon sare oo heer sare ah ama Su'aalo Weydiima oo aan naftayda ugu adeegi karo. Maalin badhkeed ayaan raadin doonaa xal halkii aan ka qaadan lahaa taleefankaas naclada. Waxay u muuqataa in kuwa kale ay oggol yihiin.
Maxaan uga hadalnaa adeegga macaamiisha a Blog suuqgeynta? Istaraatiijiyad kasta oo bulsheed waxay ku bilaabataa awoodsiin iskaa wax u qabso ah oo weyn. Marka aadan bixin qalabka ay macaamiishaadu raadinayaan, meesha ugu horeysa ee ay ka cawdaan waa khadka tooska ah. Wadahadalkaas xun wuxuu quusin karaa kan ugu wanaagsan ololayaasha suuq-geynta!
Sawirka markii hore lagu dhajiyay Zengage, Blog-ka Zendesk
Tags: Adeegga macaamiishataageero macaamiishainfographicis-adeegidzendesk